Cabdi Ilay oo La Sheegay In Ciidamada Federaalku Gacanta Ku Dhigeen - WardheerNews
Cabdi Ilay oo La Sheegay In Ciidamada Federaalku Gacanta Ku Dhigeen
Madaxweynihii hore ee Ismaamulka deegaanka Soomaalid Cabdi Maxamuud Cumar (Ilay) ayaa la sheegayaa in ciidamada Federaalku ay ka kaxaysteen xero ay leeyihiin ciidamada Liyuu Booliiska oo uu ku sugnaa tan iyo intii ay rabshaduhu ka taagnaayeen magaalada Jigjiga. Lama soo sheegin wax qalalaase ah oo dhacay xilligii la qabanayay.
Ma cadda ilaa hadda meesha ay u kaxaysteen Cabdi Ilay Ciidamada Federaalku inkastoo warar aan weli la xaqiijin ay sheegayaan in loo qaaday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
Shalay ayay ahayd markii Cabdi Ilay uu xilka ka degay iyadoo uu bedelay Axmed cabdi oo ka mid ahaa gacanyarayaashiisa.
Wixii warar ah ee soo kordha kala soco wardheerNews.
U.S. Military Strike Kills 60 Shabab Fighters in Somalia October 16, 2018
Afghan election candidate killed in Taliban attack October 17, 2018
Taliban attacks threaten Afghan parliamentary elections October 17, 2018
Detectives sent to Murang’a in probe over student’s death October 17, 2018
Tana River elders pledge to unite locals ahead of 2022 October 17, 2018
Patient sues Nairobi Women's Hospital for ‘detention’ October 17, 2018